Lambarka faarif ee SMS-sms bilaash | Ka iibso kaarar siman oo wicitaanada taleefankaaga bilaash | Nambarka bilaashka ah ee sms | Lambarrada bilaashka ah ee bilaashka ah ee helaya SMS \_ sms | LIFE PICKER - 2018
Kaarka SIM-ga iyo lambarada
Kaadhka kaararka wanaajinta waa mid aad u fiican oo ku safraya dibada Hadda uma baahnid inaad iibsato mid cusub oo dibedda ah, kharashka ku baxa. Waad ku mahadsan tahay fursadan, waxaad had iyo jeer kula xiriiri doontaa qoyskaaga iyo asxaabtaada, joogitaanka wadan kale.
Kaarka caadiga ah ee dhagaysiga waa qalab joogto ah kaas oo aad ku gudbin karto macluumaadka iyo astaanta hawlwadeen kasta. Hawlgalkeedu waa mid sahlan. Isticmaalayaasha ayaa looga baahan yahay inay soo rogaan codsiyada casriga ah, oo ay ku jiraan adeegyada dhammaan wada-hawlgalayaasha. Waxaad soo gashaa codsiga oo xulo hawlwadeen kasta oo aad isbeddel karto marka loo baahdo. Natiijo ahaan, waxaad heleysaa xariir bilaash ah oo aan roaming.
Waa maxay farsamada? Isku day
Inaad dibadda aadeyso, waa inaad iibsataa kaarka degaanka, inaad iska bixiso xidhiidhka hooyada. Haddii safarka uu gaaban yahay, iibsigu waa wax aan micno lahayn. Marka aad joogtid guriga hubaal maahan wax faa'iido leh. Tani waxaa loola jeedaa, kaadhadhka wanaajinta iyo lambarrada telifoonnada ayaa la abuuray. https://freeje.com/servisy/sms-nomer/. Tani waxay badbaadineysaa waqti iyo lacag.
Looma baahna in la bixiyo roaming;
Looma baahna inaad iibsato kaararka taleefannada dhowr ah ee isgaarsiinta;
awooda si dhaqso ah wax looga beddelo siduu
xulashada dalabyo faa'iido leh oo ka yimaada wadayaasha;
waxaa laga heli karaa guriga iyo dibedda;
Looma baahna inaad dib u buuxiso, raadi meelo lagu buuxiyo.
Waxaad isku xiri kartaa kaar siman oo wata codsiga. Wixii maadadaas waxay isku xiran tahay sim https://freeje.com/servisy/virtual-sim/ kombiyuutarka, waxaana loo isticmaali karaa barnaamijka. Looma baahna in lagu xiro gobolka, waddanka. Sidaas darteed, waxaad fursad u leeyihiin in ay u safraan, isgaadhsiin ee canshuuraha ee shaqaale, meel ammaan ah oo magaciisa. Xaqiiq ahaan, kaadhka kaararka wanaajiya wuxuu u shaqeeyaa sida VPN. Uma baahnid inaad bixiso adeega, waxaa laga helaa meel kasta oo ay ku xirantahay internetka. Tayada isgaadhsiintu waxay ku xiran tahay telefoonkaaga iyo hawlwadeenada, adeeggu waa kaliya dhexdhexaadiye.
Khariidadda dariiqa ayaa sidoo kale ku habboon isticmaalka ganacsiga. Waxay leedahay dhammaan fursadaha wadaxaajoodka, soo wacaan soo gudbinta, duubkooda. Adeeggu wuxuu kaloo noqon karaa mid deg deg ah oo si sahlan loo dhaqaajiyo. Waxaas oo dhan waxaa lagu sameeyaa barnaamijyo gaar ah.
Ha lumin wakhtiga iyo lacagta, u adeegso codsiyada faa'iido leh oo ay iska iloobaan dhibaatooyinka xiriirka dibadda!
Anigu garan maayo sababta aan weli u isticmaali tirada dalwaddii, waayo, kaasu waa mid aad u sahlan, kharash-ool ah iyo in aadan u baahan tahay inaad ku wareegsan ay maamulaan si ay u buuxiyaan ilaa - qabow!
Waxay arrintu u muuqataa runtii sida khiyaali ah, anigu ma rumaysan karo waa lacag la'aan, hubi in ay isku dayaan!
Fikradda waa mid aad u xiiso badan, uma baahnid inaad iibsato SIM dhab ah si aad u isticmaasho muddada gaaban adeegyada adeega.
Lambarka tiknoolajiyada waa qabow! Waxaan tegay fasax oo waxaan ku qaatay adeegga MANGO OFFICE. Wax dhibaato ah kuma lahan. Waxa ugu fiican.